China BD1AE Ft Mgbapu Ime Machine na ndị na-emepụta | Jinqiu
Nkebi Nke BD1AE
Voltaji / Oge ole 220V / 50Hz
Mbadamba ala 432mm
Mkpokọta nha 72.2kg
Ibu ibu ígwè 1X12.8kg
Main ahụ mbukota size 535X435X375mm
Nkume bụ ihe dị ezigbo mkpa nke na-eme mgbakwunye dị oke ọnụ na ụlọ ọ bụla, ọ bụghị naanị na ọ siri ike ma sie ike kamakwa nwee ọtụtụ agba na textures. Ya mere, ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ, ụlọ ahịa, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ndị dị elu na ihe ndị ọzọ ga-eji nkume nkịtị dị ka ihe ịchọ mma ala, ma jiri ọtụtụ nkume dị iche iche n'otu ebe ahụ. Ọ bụ ezie na nkume siri ike ma sie ike, ihu igwe na okporo ụzọ ga-emebi ya ma tufuo uru ya. Ọ bụrụ na a ga-edochi ya, ọ ga-eme ọ bụghị naanị na-eri ihe kamakwa emetụta nkịtị ọrụ na ndụ. Ya mere, ọ ka mma imeghari.
Ugboro ala a na-emegharị maka imezi, dịka igwe dị iche iche nwere ike igweri, nchacha, wepụ wax, na-emegharị na ala kristal ngwa ngwa site na otu igwe. The arọ bụ zuru ezu, nwere ike iji dị iche iche ike nkume n'ala, ala na-agba mkpa ka mma-egweri na polishing arụmọrụ. Humanized imewe, n'ihu electric eweli ngwaọrụ, n'azụ vetikal ike igwe kwụ ukpụhọde ngwaọrụ na-eme ka ọ bụla ahịhịa ka egweri ala na mfe iji rụọ ọrụ. Usoro mmeghari ohuru na-echekwa ihe karịrị 80% nke ego karịa ịzụrụ, nwere ike ịhazi n'abalị, ọ bụghị imepụta oge ọ bụla.
Igwe na-emegharị ala na kemịkalụ, bụ nke izizi ahọrọ maka ịkọ ala.
Nke gara aga: BD3A Multi-ọrụ Brushing igwe
Osote: BD2AE-Ulo ohuru ohuru
15L / 32L / 45L Wet kpọrọ nkụ agụụ Cleaner BS-1020A 10 ...
20L / 32L / 45L Wet kpọrọ nkụ agụụ Cleaner YJ1020 1032 ...
70L / 80L Wet na kpọrọ nkụ agụụ Cleaner na squeege ...